हारको जिम्मा शेरबहादुर देउबाले लिनुपर्छ - गगन थापा - info4nepal
नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले हामीले बनाएकाे खेलमैदानमा कम्युनिष्टले ठुलाे षडयन्त्र गरी खतरनाक खेल खेलेर पहिलाे दल बन्न पुगेकाे अाराेप लगाए।
नेता थापाले कम्युनिष्टहरु दलिय भागबण्डामा सहभागी भएर त्यसको दोष कांग्रेसलाई लगार्इ आम जनतालार्इ दिगभ्रमित गर्ने काम गरी चुनाव जितेर पहिलो दल बनेको बताए।
नेता थापाले निर्वाचन समिक्षा र आगामी कार्यदिशाबारे ५१ पेजकाे लामो प्रतिवेदन उक्त कुरा उल्लेख गरी केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गरेका छन्।
नेता थापाले आफू सरकारमा रहँदा कांग्रेसले संस्थाहरुको राजनीतिकरण गर्नुका साथै सामाजिक मुद्दामा कांग्रेस पछि परेको लगायतका विषयबारे प्रतिवेदनले विस्तृत व्याख्या गरेको छ। प्रतिवेदनमा कांग्रेस चुनावकाे बेलामा हेलचेक्रार्इ गरेकाे कुरासमेत उल्लेख गरिएकाे छ।
मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा कांग्रेसको हार र अबको कार्यदिशा के हुने ? भन्ने प्रतिवेदनमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ।
‘खेल मैदान हाम्रो, नियम हाम्रो, खेल हाम्रो, के उनीहरूले अत्यधिक राम्रो खेलेका हुन तरु होइनन्। तर हामीले २०४८ देखि खेल मैदानको ठूलो हिस्सा खाली छोडेर सानो हिस्सामा सिमित भएपछि स्वाभाविक रूपले चुनावी नतिजा पनि झन् भन्दा झन् बढी हाम्रो प्रतिकुल हुँदै गयो। उनीहरूको कुनैपनि सैद्धान्तिक मोर्चामा हामीले प्रश्न उठाउन सकेनौं,’ उनले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको समझदारी र भागबण्डाको अवधारणा छाड्नुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ। पार्टी महाधिवेशन पछाडि विधान विपरितका जति पनि संरचना बनेका छन्, सबैलाई तत्काल खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
समीक्षाको क्रममा समेत गम्भीर विषयहरु उठेकाले महासमितिबाट ती विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव युवा नेताहरुले राखेका छन्।
संघीय प्रणालीका नयाँ संरचना बनेकाले त्यहाँ महाधिवेशन बैठकबाट संशोधित विधान पारित गरी शीघ्र महाधिवेशनमा जान माग गरिएको छ।
पार्टीको नेतृत्व भने महाधिवेशनले नै टुंग्याउने विषय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर अहिलेकै नेतृत्वको निरन्तरता खोज्नु भनेको जनादेश र मतादेशलाई नबुझिएको उल्लेख छ।
‘०४८ सालयता जसरी विचार र संगठनमा ढोका बन्द भए त्यसरी नेतृत्वमा रहेका पुराना मान्छेको स्वभाविक बहिर्गमन र नयाँ मान्छेको आगमन नहुनाले एजेन्डा, विचार र क्षमताको दृष्टिले पार्टी जमेको पोखरी जस्तो भएको छ। पार्टीको चुस्त संगठन चलाउन प्रष्ट सैद्धान्तिक खाका त कोर्‍यौं तर त्यसलाई चलाउने नेतृत्व सिथिल र यथास्थितिवादी छ भने संगठनमा गतिशीलता कसरी आउँछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले अहिलेकै नेतृत्वको निरन्तरता खोज्नु जनादेश र मतादेशलाई नबुझ्नु नै हो।’
‘राजनीति जितेर चुनाव हारेका छौं,अब राजनीति जितेकै हो भनेर पनि नबसौं चुनाव हारेको भनेर निराश पनि नबनौं’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अब कम्युनिष्टको गठबन्धन के होलारु भनेर नकुरौं, ५ वर्षपछिको चुनाव यस्तो अवस्था बनाऔं सबै पार्टी एक ठाँउमा मिलेर चुनाव लड्दा पनि हामीले अहिलेको मतदाता जोगाएर कम्तिमा १५ लाख भोट थपेर एक्लै बहुमतसहितको पहिलो पार्टी बनाउनेछौं।’ उनले पेश गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
साभार: नेपाल पाना nepal pana
रमेश खरेलले नेपालि कांग्रेसबाट राजनीति गर्ने , ( एक बहस )
ranjan April 12, 2018
प्रधानमन्त्रि के.पी. ओली लाइ एस्तो सुझाब दिदै एकपटक पढनै पर्ने
जनता समक्ष गृहमन्त्री थापाको अपिल : मलाई साथ दिनुस् सबै खाले सिण्डिकेट अन्त्य गर्छु